Xarumaheena-caafimaad iyo Wada-hawlgalayaasha - Vondt.net
Xarumaheena Caafimaadka iyo Wada-hawlgalayaashayada
- Aragtidayada? Waxaan Had iyo jeer ka shaqeynaa inaan noqono Xirfadleyda Daryeelka Caafimaadka ee ugu Sharci Fiican ee Dadweynaha ee Murqaha, Jilbaha iyo Laabatooyinka
VondtKlinikkene waa shabakad xirfadleed oo sii kordheysa oo rugaha caafimaadka leh oo leh rabitaan ah inay had iyo jeer leeyihiin karti sare oo gaar ah xagga qiimaynta, daaweynta iyo tababarka. Liistada hoose waxaad kaheli doontaa macluumaad dheeri ah oo kusaabsan xarumaheena xiriirka laleh, iyo sidoo kale lamaanayaasha. Aragtidayadu waa inaad dareento kalsooni inaad helayso waayo-aragnimada ugu fiican ee bukaanka oo ay bixiyaan khubaro daryeel caafimaad oo rasmi ah oo idman oo leh takhasus gaar ah muruqyada, jilicsanaanta iyo kala-goysyada.
Lambertseter: Lambertseter Chiropractor Center iyo Jimicsiga Jirka
Eidsvoll: Xarunta Caafimaadka ee loo yaqaan 'Eidsvoll Healthy Chiropractor Center iyo jimicsiga jirka
Albaabka Wergelands 5, 2080 Eidsvoll (Sundet)
Eidsvoll: Råholt Chiropractor Center iyo jimicsiga jimicsiga
Haye, magaceygu ​​waa Alexander Andorff. Daaweeye ciribtire oo la aqoonsan yahay iyo daaweeye dhaqancelin biomechanical ah.
Anigu waxaan ahay tifaftiraha guud ee Vondt.net iyo Vondtklinikkene - kana shaqeeya Lambertseter Chiropractor Center iyo Jimicsiga Jirka. Xiriir hoose oo casri ah oo ku saabsan cudurada muruqyada, waa farxad dhab ah in laga caawiyo bukaanada inay ku noqdaan nolol maalmeedkooda ka wanaagsan.
Daraasad dhameystiran iyo habka casriga ah ee daaweynta ayaa ah qiimaha aasaasiga ah ee Rugaha Xanuunka - iyo la-hawlgalayaashayada. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa khabiirada caafimaadka iyo GP-yada si loo hagaajiyo natiijooyinka. Sidan oo kale, waxaan ku siin karnaa qaar badan oo khibrad bukaan ah xitaa ka sii fiican oo badbaado leh. Qiyamkeenna asaasiga ahi waxay ka kooban yihiin 4 qodob oo waaweyn:
Iyadoo in ka badan 85000 oo raacsan ay ku leeyihiin warbaahinta bulshada, iyo sidoo kale ku dhawaad ​​​​15 milyan oo soo booqda sannadkii (laga bilaabo Maarso 2022), sidoo kale la yaab maaha qaar badan in aan maalin kasta ka jawaabno su'aalaha ku saabsan daaweeyayaasha lagu taliyay ee dalka oo dhan haddii ay juqraafi ahaan adag tahay na soo gaadh. Waqti ka waqti waxaan helnaa su'aalo aad u tiro badan oo ay adkaan karto in laga wada jawaabo dhammaantood, waana sababta saxda ah ee aan u abuurnay qaybtaan - halkaasoo aan si tartiib tartiib ah ugu sii socon doonno, marka lagu daro rugo caafimaad oo xiriir la leh, waxaan ku darnaa talooyinkayaga sida gaarka ah loogu taliyay guud ahaan xirfadlayaasha caafimaadka ee idman ee deegaankaaga.
Bukaanka: Waqti u qabso Murqahaaga iyo Xanuunada wadajirka ah?
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka akhriso rugaha caafimaadka ama inaad ballan qabsato, waxaad riixi kartaa xiriiriyeyaasha kore. Ballanta waxaa lagu sameeyaa bogagga internetka ee kiliinikada. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto haddii aad qabtid su'aalo ama wixii la mid ah.
Dhakhaatiirta jimicsiga jirka ama lafo-jileec: nala shaqee?
Rugaha caafimaadku waxay tilmaami karaan wada-qabsasho bulsho oo wanaagsan, liisaska bukaan-socodka mashquulka ah, fursado shaqo oo wanaagsan iyo goob waxbarasho oo wanaagsan. Waxaan had iyo jeer raadineynaa xirfadlayaal xirfad leh - waxaana badanaa haysanaa fursado inkasta oo aan badiyaa u baahnayn inaan ku dhajino boosaska shaqada sababtoo ah dadka codsanaya iyada oo aan la codsan. Rugaha caafimaadku waxay si gaar ah diiradda u saaraan xanuunka loo yaqaan 'chiropractic and physiotherapy' ee casriga ah, laakiin sidoo kale waxaan aad u xiisayneynaa maqalka naprapaths, osteopaths iyo masseurs. Si aad nala soo xiriirto, waxaan ku weydiineynaa inaad fariin toos ah u soo dirto mid ka mid ah rugaha caafimaadka ee kore. Waxaan rajaynaynaa in aan warkaaga ku maqlo.